Bamba Izinkampani Zilandise | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 8, i-2011 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Ngingahlanganyela nawe izindaba ezimangazayo ezisabisayo emlandweni wami namabhange namakhadi esikweletu. Okunye kwakho kube yiphutha lami kepha iningi lazo yizenzo ezingenangqondo zamabhange. Ngiyazibuza ukuthi laba bantu balala kanjani ebusuku… inzuzo enkulu, ukuxegiselwa imali, amabhonasi aphezulu kanye nezimali ezihlekisayo zokweqa ngokweqile azikaze zibashukumise ukwenza ngcono izinhlelo zabo.
Nasi isibonelo esihle… ikhadi lami lesikweletu lebhizinisi livaliwe kabili ngenkathi ngisohambweni. Ngaphambi kwalolu hambo kokubili, ngazise ibhange ukuthi ngizohamba nokuqinisekisa ukuthi angimakiwe. Izingcingo bekungukuchitha isikhathi - ngivalelwe kabili umsebenzi osolisayo. Kukabili kwakwanele… futhi uhlelo lwakudala lwe-inthanethi nokuntuleka kosizo ngezimpelasonto nobusuku ekugcineni kwangenza ngabuyela ebhange elikhulu. Sizobabiza nge-JP.
I-JP inohlelo oluhle kakhulu lwe-inthanethi. I-JP inezintambo ezingaphandle zamakhono. I-JP inohlelo lokusebenza lapho ngingafaka khona isheke ngokuthatha isithombe salo. I-JP inamandla okukhokha nge-akhawunti yami. Mhlawumbe into yama-coole… u-JP unginikeze ibhange lami. Yini umuntu osebenza ngebhange? Ngumuntu okufanele ngimbhalele i-imeyili futhi ngimshayele njalo uma nginenkinga. Ibhange lami uqobo bese lingitshela inombolo engu-1-800 ukuthi ngifonele usizo. Ukuthuthuka okukhulu ohlelweni oludala lokuvele ushayele inombolo engu-1-800 kwasekuqaleni. [Yebo, lokho ukubhuqa]
I-BTW: Ibhange lami uqobo luyisithandwa futhi ngiyazi ukuthi uzama ukungisiza ngangokunokwenzeka. Ayilungisi inkinga, noma kunjalo.
Kule mpelasonto, bengidinga uku-oda amanye amathikithi endiza Bandakanya ingqungquthela eSan Francisco ekupheleni kwale nyanga. Okokuqala ngisebenzise uKayak futhi ikhadi lesikweletu lehlulekile. Ngokulandelayo ngisebenzise isiza seDelta.com futhi sehluleka. Zombili lezi zikhathi zathi ikheli lami alifanelani ne-akhawunti yami. Inkinga kuphela yalokho ikheli lami lifakwe ngqo ngendlela efanayo kuwo womabili amasayithi ngakho-ke akukho mahluko ngempela. Esikhundleni sokuvala ucingo, ngama kancane ngenkathi omele iDelta efonela ibhange lami uqobo ukuqinisekisa ikheli. (Kuhle kakhulu kweDelta!)
Ummeli weDelta ubuyile wangitshela ukuthi ibhange lami libatshele ukuthi ikheli lami elihlinzekiwe alihambelani. Manje sengicasukile. Okulandelayo emugqeni owami ibhange lomuntu siqu. Ibhange lami lixhumana nabasekeli bezobuchwepheshe futhi bancoma ukuthi ngizame ikheli lami nge-Zip4 noma ngaphandle kwe-zip code yami. Ngokuzimisela.
Isiza seDelta asikuvumeli ukwelulwa kwe-Zip4, ngakho-ke isikhathi esilahlekile phakathi kwama-imeyili ami nezingcingo zebhange lami siqu eqenjini lakhe lokusekelwa kube ukugeza. Ngazisa umphathi wami webhange ukuthi akusasebenzi. Ezinsukwini ezine kamuva futhi anginawo amathikithi.
Ngalesi sikhathi ungazibuza ukuthi kungani ngingavele ngithathe elinye lamakhadi ami bese ngikhokhela ithikithi. Kungani? Ngoba lokhu kufanele kusebenze. Yilokhu ikhadi lesikweletu lebhizinisi elenzelwe… lokwenza izinto ezinjengokubhuka uhambo, ukuthenga imishini, njll do nginezinye izindlela zokuthenga ithikithi futhi ngiqinisekile ukuthi abantu abaningi baluphazamisile uhlelo futhi bakwenza lokho.
Sonke sibekezelela ngokwethembeka ukusebenza okuningi empilweni yethu. Sibekezelela amaphutha esoftware, izingqinamba zebhange, izingcingo, izingqinamba ze-Intanethi… izimpilo zethu azisaba lula ngayo yonke le nto, kuya ngokuya kuba yinkimbinkimbi. Futhi njengoba singeza ubunzima obengeziwe, sithola izinkinga eziningi. Okusemqoka kuzo zonke lezi zinkinga ukuthi sesilindele ukuthi kube khona ukusebenza futhi singasaziphenduli izinkampani. Kulula ukuthatha elinye ikhadi lesikweletu kunokuqhubeka ushayela futhi uthumele i-imeyili kubhange wami.
Kepha kusasa ngizolahlekelwa ngumkhiqizo othile ocingweni naku-imeyili nge ibhange lomuntu siqu. Ukukhiqiza kwakhe (ngeshwa) kuzohlupheka, njengeqembu lobuchwepheshe asebenza nalo. Ngizoqinisekisa ukuthi lokhu kuyalungiswa - ukuze abanye bangadluli kulokho engibhekene nakho.
Uma sonke izinkampani besiziphendulela, sizoqhubeka nokwenza ngcono futhi sizuze sonke kukho.
Tags: ukuphendulaibhangeizinkampanicredit cardUkukhiqiza